မန္တလေးသာသနာနှင့် ဘာသာရေးသတင်းများ - Mandalay Catholic Archdiocese
posted5Oct 2016, 21:40 by Media Admin [ updated5Oct 2016, 21:45 ]
မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ အောက်တိုဘာလအတွက် လစဉ်ဝတ်စောင့်ခြင်းနှင့် လစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး
မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ လစဉ်ဝတ်စောင့်ခြင်းကို 2016-အောက်တိုဘာလ (၄-၅) နှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ညပိုင်းတွင် ဝတ်စောင့်ခြင်းအဝင်နှင့် အောက်တိုဘာလ (၅)ရက်နေ့ နေ့လည်တွင်ဝတ်စောင့်ခြင်းပြီးဆုံးခဲ့ပြီး နေ့လည်(၂)နာရီိအချိန်တွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး နီကောလားစ်မန်ထန်းဦးမှ ဦးဆောင်ကာ မန္တလေးသာသနာအတွင်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး(၄၅)နှင့်အတူ အမျိုးသမီးကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိသူ Sr.Marcinda Moe Moe, Signis & RVA မှ Coordinator Sr.Rose Maltida Say Phaw , Media News Commission မှ Pinky တို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် ဆရာတော်ကြီးမှ မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွက် ကောင်စီ ( ၆)ခုဖွဲ့ထားကြောင်း၊ ၎င်းကောင်စီများမှာ (1) Priest’s Council, (2) College of Consultors , (3) Pastoral Council , (4) Finical Council ,(5) Mediations , (6) Business Economy Council တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ဆက်လက်ပြီးလည်း ကော်မရှင်ပေါင်း (၃၂) ခုဖွဲ့စည်းထားကြောင်း။ ၎င်းကော်မရှင်များမှာ (1) Caritas , (2) Liturgy , (3) Laity , Family & Life , (4) Signis & R.V.A , (5) Youth in General , (6) Religious , (7) P.M.S ( Collection & Fund ), (8) P.M.S ( Holy Childhood ) , (9) Catechesis , Catechism , (10) New E.V , (11) Land Estates & Temporal Goods of Church , (12) Bible Apostolate , (13) AsIPA, BEC , (14) Ex. Seminarian , (15) Bible Translation & Printing , (16) Prison Apostolate , (17) Fund Foundation & Business (18) (a) Agriculture (b) Ecology: Climate Change (c) Farmers (d) Food Security (19) Inter-religious Dialogue (20) Ecumenism (21) Migrants, Displaced people (22) Arts & Sports (23) Health-Care (24) Formal Education (25) Vocation Education (26) Women (27)Church History , New letters (28) Literature, Library (29) Agriculture Agri-business (30) Media News (31) St.Vincent de Paul ( 32) Couples for Christ စသည့်ကော်မရှင်များဖွဲ့စည်းထားကာ ၎င်းကောင်စီ(၆)ခုနှင့် ကော်မရှင် (၃၃)ခုမှ တာဝန်ရှိသူများအား ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးက (၂၀၁၇)ခုနှစ် အတွက် ထုတ်လုပ်မည့် စာအုပ်ထဲတွင် ထည့်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ အတွင်းရေးမှုး၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လစဉ်ပြု လုပ်မည့်အစည်းအဝေးအချိန်နှင့်နေရာ ၊နှစ်စဉ်ပြုအစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့် အချိန်နှင့်နေရာ စသည့်များကို နောက်လတွင် ပြုလုပ်မည့် ဝတ်စောင့်ခြင်းတွင် တစ်ပါးတည်းယူဆောင်လာရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ (နိုဝင်ဘာလ)အတွက် လစဉ်ဝတ်စောင့်ခြင်းကို နိုဝင်ဘာလ (၃-၄)ရက် နေ့တွင်ပြုလုပ်မည်ဟုလည်းသိရှိခဲ့ရပါသည်။ Pinky ( MDY-OSC)6.10.2016
လူငယ် ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် သာသနာ(၁၆) ခုမှ လူငယ် ခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းဝေး
posted 30 Sep 2016, 01:25 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 30 Sep 2016, 01:25 ]
ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်သာသနာမှ လူငယ် ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် သာသနာ(၁၆) ခုမှ လူငယ် ခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ်များ စုပေါင်းကာ မန္တလေးကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ အတွင်းရှိ ချမ်းသာကုန်း မယ်တော် ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင် ၂၀၁၆- စက်တင်ဘာလ (၂၆-၂၈) ထိ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ NCYC မှကြီးမှုးကာ အစည်းဝေးတစ်ခုကို ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ကက်သလစ်သာသနာ (၁၆)ခုမှ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် လူငယ်ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင်ပေါင်း(၆၀) ပါဝင်တက် ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်လူငယ်ဥက္ကဌ ကိုပီတာလထွယ်မှလည်း ” မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ လူငယ် ဒါရိုက်တာ အစည်းအဝေးကတော့ တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အစည်းဝေးကတော့ဟိုးအရင်တုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Youth Policies , Structure တွေ Vision , Mission , Goal တွေကို ပြန်ပြီးတော့ Review ပြန်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ သာသနာတိုင်းမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေ ဘာတွေ လိုအပ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုတွေသွားနေကြတယ် ကိုယ့်သာနာမှာ ဘာအခက်အခဲတွေရှိနေသလည်းဆိုတဲ့ အသံကို ကျနော်တို့ကနေ နားထောင်ပြီး အခု အစည်းဝေးမှာဆုံးဖြတ်တာတော့ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း အချင်းချင်း ဖလှယ်တဲ့အနေနဲ့ပဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ Interfaith active မှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဦးဆောင်ပြီးတော့ လုပ်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျနော်တို့ အဖွဲ့ကနေ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ မေတ္တာစက်ဝိုင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာ အတူတကွ ပူပေါင်း လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဟု ’’ ဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် လူငယ်များအား ၎င်းတို့ သာသနာအသီးသီးတွင် လိုအပ်နေသော အရာများနှင့် လုပ်ဆောင်ပေးစေလိုသည့်အရာများကို ဆွေးနွေး တင်ပြခိုင်းရာတွင် မန္တလေးဂိုဏ်း ချုပ်သာသနာအတွင်းရှိ သာသနာများ စုပေါင်းကာ လူငယ်ကော်မရှင်၏ လိုအပ်များနှင့် လုပ်ဆောင် ပေးစေလိုသည့်အရာများကို တင်ပြ ဆွေးနွေးကြရာတွင် လူငယ်ဖွဲ့စည်းပုံများ လိုအပ်ကြောင်း လူငယ်များအား ပြုပြင်ပြောင်းလည်းပေးမည့် Centreများ လိုအပ်ကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှာပေး စေလိုကြောင်း၊ Archdiocese တစ်ခုအနေနဲ့ ကိုက်ညီမည့် နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများရေးဆွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လူငယ် EC member များပါဝင်ကာ ဆုံးဖြတ်စေလိုကြောင်း၊ Structure အတိုင်းသာ တာဝန်များကို လုပ်ဆောင်စေလိုကြောင်း၊ လူငယ်ရေးရာနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာများကို ထိရောက်စွာ သင်ကြားပေးစေလိုကြောင်း လူငယ် ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီးများ အစည်းအဝေးကဲ့သို့ လူငယ်ခေါင်းဆောင် အစည်းအဝေးများလည်း ပြုလုပ်ပေးစေလိုကြောင်း၊လူငယ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကို ပေးစေလိုကြောင်း၊ ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးစေလိုကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဖြစ်စဉ်များတွင်လည်း ပါဝင် လှုပ်ရှားခွင့်ပြုစေလိုကြောင်းတို့ကို မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအသီးသီးမှ ၎င်းတို့၏ သာသနာအတွင်းရှိ လူငယ်ကော်မရှင်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့်အရာများနှင့် ပြုလုပ်ပေးစေလိုသည့် အရာများကို လူငယ်ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီးများထံ တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွင်းရှိ သာသာနများ စုပေါင်းဆွေးနွေးရာတွင် ဘုရားကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးများ လူငယ်လှုပ်ရှားမှုများကို အားပေးစေလိုကြောင်း၊ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီးများအား လူငယ့်တာဝန် တစ်ခုတည်းကိုသာ တာဝန်ပေးစေလိုကြောင်း၊ Faith , Moral , Health , Peace & Justice , Anti Human Trafficking , Marriage , Drug , Self management , Democracy , Ecclesiastic , Social communication , Human Right ,စသည့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် သင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးစေလိုကြောင်း၊ Director , EC များ ခန့်အပ်ရန်နှင့် အလုပ်လုပ်ရန် Rules & Regulations များ သတ်မှတ်ထား စေလိုကြောင်း၊ Music နှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းများလည်း ပေးစေလိုကြောင်းတို့ကို ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွင်းမှ သာသနာများမှ စုပေါင်းဆွေးနွေးကာ ၎င်းတို့သာသနာအတွင်းရှိ လူငယ်ကော်မရှင်တွင် လုပ်ဆောင်ပေးစေလိုသည့် အရာများကို တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး တောင်ကြီး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွင်းရှိ သာသနာများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွင် လူငယ်ဒါရိုက်တာ ခန့်အပ် တာဝန်ပေးရာတွင် လူငယ်များ၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ပေးစေလိုကြောင်း၊ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီးသက်တမ်းတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးစေလိုကြောင်း လူငယ့် ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းကဲ့သို့ သင်တန်းများကို စေလွှတ်ရာတွင် သာသနာ့အတွက် အမှန်တကယ် ပြန်လည် ဆက်ကပ်ချင်စိတ်ရှိမည့် လူငယ် အားသာ စေလွှတ်ပေးစေလိုကြောင်း၊ ပညာရေးအတွက် youth scholarship များ ချိတ်ဆက်ပေးစေလိုကြောင်း၊ NCYCမှ သင်ကြားပေးနေသည့် သင်တန်းများကို ရန်ကုန်တွင်သာမက နယ်များသို့ ဆင်း၍လည်း သင်ကြားပေးစေလိုကြောင်း၊ လူငယ်ဒါရိုက်တာများ လူငယ်များ၏အသံကို နားထောင်ပေးစေလိုကြောင်း၊အလေးထားပေးစေလိုကြောင်း၊ လူငယ်များနှင့် တစ်သားတည်း ရှိစေလိုကြောင်း ကမ္ဘာ့လူငယ်ပွဲတော်အား ယခုထက် ပိုမိုသောလူဦးရေဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ရန် ရန်ပုံငွေများရှာဖွေရန် နည်းလမ်းများရှာဖွေစေလိုကြောင်း၊ NCYC မှ အားကစားနှင့် ဂီတနှင့် ပတ်သက်သည်များလည်း လုပ်ပေးစေလိုကြောင်းကို တောင်းကြီးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွင်းရှိ သာသနာများမှ စုပေါင်းဆွေးနွေးကာ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီးများအား တင်ပြ သွားခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီး Fr. Joseph အယ်ကော်ထူး မှ “ ပထမနှစ်ရက်ကတော့ လူကုန်ကူးမှုနှင့် ဆိုင်တဲ့သင်တန်းကို ပို့ချပေးခဲ့တယ်။ အခု ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ အစည်းအဝေးဆိုပေမယ့် ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ အခုမှ ဆွေးနွေးနေဆဲ ဖြစ်နေတုန်းမို့လို့ပါ။ ဒီမှာ အခုဆွေးနွေးချက်တွေကို နားထောင်ပြီးမှဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရမှာ။အခုခေတ် လူငယ်တွေရဲ့ ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ လူငယ်တွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေမှာ ကမ္ဘာကြီးက ပေးတဲ့အရာတွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေက အရမ်းများနေတော့ သူတို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေများတယ် သူတို့ ကြိုးစားတယ်။ အဲ့ဒီ လိုဆိုတော့ ဝိညာဉ်ရေးပိုင်းမှာက ငါးဆယ်လောက်ပဲ ပါဝင်နိုင်ကြတာကို တွေ့မြင်နေရတယ်။ဒါက လူငယ်တွေတင် မဟုတ်ဘဲ အားလုံးနီးပါးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ ကိုယ်တော့်အနေနဲ့ကတော့ အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ ကမ္ဘာကြီးကပေးတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေပေါ်မှာ သာသနာကနေပြီး အသိအမြင်အားဖြင့်သော် လည်းကောင်း၊ ပုံမှန် ဘုရားစကားသင်ကြားပေးခြင်း ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဝတ်စောင့် ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သူတို့တွေ ပြန်ပါလာနိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ ရန်ကုန်၊အင်းစိန် ဆယ်မိုင်ကုန်းတွင် အင်္ဂလိပ်စာ၊ ကွန်ပျူတာတွေ သင်တန်းက (၃)တစ်ကြိမ်၊ Leadership သင်တန်းက (၇)လ တစ်ကြိမ် အခမဲ့ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးတယ်။ သာသနာတစ်ခုကို လူငယ်တစ်ဦးစီ တက်ရောက်နိုင်တယ် “ ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ဘုန်းတော်ကြီး Fr. Joseph အယ်ကော်ထူးမှ ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။
Pinky ( MDY – OSC) 29.9.2016
ကျန်းမာရေးကော်မရှင်မှ ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးဝါးကုသမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းသတင်း
posted 1 Sep 2016, 21:06 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 1 Sep 2016, 21:06 ]
မန္တလေးကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ Fr.Dominic Thiha ဦးဆောင်သော ကျန်းမာရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် ၂၈.၈.၂၀၁၆ရက်နေ့က St. John ဘုရားကျောင်း တွင် ဆေးဝါးကုသမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကျန်းမာရေးကော်မှရှင်မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဒေါ်ဂျူလီယာ ကြူကြူခင် မှ ဆေးကုသမှု ခံယူရန် ရောက်ရှိလာသူများကို Fr.Dominic Thiha မှ ကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သက်သော ဗဟုသုတများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၊ Dr.Nay Myo Thu မှလည်း သွားကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက် သည်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားကြောင်း၊ Dr.Novel မှ အထွေထွေ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများ၊ အထူးသဖြင့် ရေကြီး ရေလျှံချိန်နှင့် မိုးတွင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်တတ် သောရောဂါများ အကြောင်းကို ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် ရောဂါများဖြစ်ပေါ်လာလျှင်လည်း တတ်ကျွမ်းတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အချိန်မှီ ကုသနိုင်ဖို့ရန်တွက် ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးခဲ့ကြသည်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။
စိန်ဂျွန်းသာသနာမှ လူနာပေါင်း (၅၀)ကျော်မှ ဆေးဝါးကုသမှုကို လာရောက် ခံယူကြရာ အထူးသဖြင့် သွားနှင့် ပတ်သက်သော လူနာများအား ကုသမှုပြု လုပ်ပေးခဲ့ ရသည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည်။
မိုးရာသီဖြစ်တဲ့အတွက် နယ်မြို့များသို့ မသွားရောက်ပဲ မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ ဘုရားကျောင်းများ၌သာ လှည့်လည်ကာ ဆေးဝါးကုသမှုကို ပြုလုပ်ပေးနေသည်ဟု ကျန်းမာရေးကော်မရှင်မှ တဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည် ဒေါ်ဂျူလီယာကြူကြူခင်က ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။
Pinky ( Mdy- OSC)
မန္တလေးသာသနာလုံးဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း အစီအစဉ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်းသတင်း
posted5Aug 2016, 02:21 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated5Aug 2016, 02:21 ]
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၊ (၁-၃) ရက်ထိ မန္တလေးတိုင်း စဉ်ကိုင်မြို့နယ် ချမ်းသာကုန်းရွာတွင် မန္တလေး ကရုဏာ လူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသင်းမှ ကြီးမှုးကာ မန္တလေးသာသနာလုံးဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်း အစီအစဉ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ မန္တလေး ကက်သလစ်သာသနာမှ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး နီကောလားစ် မန်ထန်း၊ မန္တလေးသာသနာမှ ကရုဏာ ဒါရိုက်တာ Fr.Cyril Myint Soe, မန္တလေးသာသနာအတွင်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး (၈)ပါးနှင့် သာသနာအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်(၃၀)ဦး ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
မန္တလေး ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ဆရာတော်ကြီးနီကောလားစ် မန်ထန်းမှ သြဝါဒ မြွတ်ကြားရာတွင် ကက်သလစ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဟာ ဆေးကြောခြင်း ခံယူကတည်းက ဘာသာတရားလုပ်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် တန်ဖိုးညီမျှစွာ ရှိ်ကြတယ်။ ဒေသတစ်ခု ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဆရာတော်တွေ ဘုန်းကြီးတွေထက် အဲဒီဒေသမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေက သာပိုပြီး တာဝန်ရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်လုပ်ရမယ့် ကိုယ့်တာဝန်တွေကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒေသတစ်ခုမှာ အရေးပေါ် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီဆို ဒေသခံ တာဝန်တွေကမှ တဆင့် ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဆရာတော်တွေ တာဝန်ရှိသူတွေကိ်ု ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မန္တလေးသာသနာ တစ်ခုလုံး ဆိုင်ရာ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်တယ်ဟု မြွတ်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
မန္တလေး ကရုဏာမြန်မာ လူမှု စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသင်းမှ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး စီမံကိန်း တာဝန်ခံ ကိုသန်းမင်းထွန်းမှ သဘာဝဘေး အန္တရာယ် မဖြစ်ပေါ်ခင် ကြို တင်ပြင်ဆင် ရမည့်အရာများနှင့် လုပ်ဆောင်ထားသင့် သိများမှာ “ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု လုပ်ငန်း တွေအနေနဲ့ မတူညီတဲ့ အဆင့်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မိသားစုအဆင့်၊ ကျေးရွာအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်၊ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်စတဲ့ မတူညီတဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အပိုင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ ကျေးရွာနဲ့ မိသားစု အဆင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု လုပ်ငန်းတွေ အားကောင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး မိသားစုအဆင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် မကျရောက်ခင် အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတန်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ လတ်တလော အဆင်သင့် စားနိုင်မယ့် အသင့်စား အစားအစာတွေ၊ ဆေးဝါးတွေ၊ လူတစ်ယောက် အဝတ်စား (၃)စုံစီ၊ ဓာတ်မီး၊ ဖယောင်းတိုင်၊ ကြိုးခွေ၊ စတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကြိုတင်ထုပ်ပိုး ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါ ဖြစ်တတ်တဲ့ အတွက် သောက်ရေသန့်လည်း ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါကတော့ မိသားစု အဆင့်ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုဖြစ်တယ်။ နောက်ကျေးရွာ အဆင့်ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ လက်ရှိ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် အရ အရေးပေါ်ထွက်လမ်းတွေ ရှာဖွေထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိဒေသမှာရှိတဲ့ လူတွေ အရေးပေါ် ဘေးလွတ်ရာ ထွက်နိုင်ဖို့ ရှင်းလင်းထားဖို့ လိုအပ်သလို ပြည်သူလူထုအတွက် အရေးပေါ် ကိရိယာတွေကိုလည်း ရှာဖွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးပေါ် ခိုလှုံရာနေရာကို ခိုလှုံကြမယ့်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ လိုအပ်သလို သူတုိ့အပေါ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီ ပြုမူ ပြောဆို ဆက်ဆံဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွေ ၊လမ်း တံတားတွေကအစ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ခင် အချိန်ရော၊ ဖြစ်နေချိန်မှာပါ ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေး ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးပေါ် ထွက်ပြေးဖို့ အသုံးပြုမယ့် လမ်း တံတားတွေ၊ မိသားစုတွေ အရေးပေါ် ခိုလှုံရာနေရာကို ရောက်ရှိ်လာမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အစားအသောက် တွေကအစ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားရမယ်။ ရှေးဦး သူနာပြုစုနည်းတွေကိုလည်း အားကောင်းစွာနဲ့ လုပ်အားပေးနိုင်မယ့်အဖွဲ့တွေ လိုအပ်တယ်။ နောက် ဘေးလွတ်ရာကို ကူညီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ လုပ်အားပေးအဖွဲ့တွေလည်း လိုအပ်ပါ တယ်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုဖြစ်ရင် အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ဖို့ကြိုတင် သတိပေးရေး စနစ်ဟာလည်း အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်မှီ ပြောင်းရွှေ့ရမယ့် အချိန်မှာ ကလေးသူငယ် ၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ နာမကျန်းဖြစ်နေသူနဲ့ မသန်စွမ်းများကို အချိန်မှီ ဘေးလွတ်ရာသို့ ကူညီ ရွှေ့ပြောင်း ပေးနိုင်မယ့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအစာနှင့် အသုံးအဆောင်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး အသက်အပိုင်းအခြားအလိုက် ဝေငှပေးနိုင်ဖို့ စာရင်းများကိုလည်း အချိန်မှီ ပြုစုထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး အနေနဲ့ အိမ်ထဲမှာ ပိတ်မိနေသူတွေ၊ ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ သူတွေရဲ့စာရင်းလေးတွေကို ပြုစုထားပြီး အရေးပေါ် ထွက်ပြေးမယ့် လမ်းကြောင်းက စလိုအပ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျေးရွာ အဆင့်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒက ထုတ်ပြန်တဲ့ မိုးလေဝသက သတင်းတွေကို နားဆင်ပြီး အကြံပြုချက်တွေကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ မြို့နယ်နဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်း သူတို့ရဲ့ အကြံညဏ်တွေ၊ ဦးဆောင်ဦးရွက်မှု အပိုင်းတွေကို လိုက်နာဖို့လိုတယ်။ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ အခါ ရွာတစ်ရွာတည်း လုပ်လို့မရပါဘူး၊ ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ် ဆောင်မှသာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေတွေဟာ လျော့နည်းသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုတွေ ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေဟာ သဘာဝဘေး အန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ဆိုင်ရာတွေ အတွက် အရမ်းကို အရေးပါပါတယ်ဟု ကိုသန်းမင်းထွန်းမှ ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။
သင်တန်း ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မန္တလေးသာသနာအတွင်းမှာရှိတဲ့ မိသားစုတွေ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေ ကြောင့် ဆုံးရှုံး နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေကို လျော့ချပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ စနစ်နဲ့ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ မိသားစုတွေဖြစ်စေရန် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်တန်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဦးတည်ချက်ကတော့ ဒီသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီသင်တန်းသားတွေဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေး အသိပညာမြင့်မားလာဖို့၊ သာသနာအဆင့် ၊ ဇုံအဆင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီနဲ့ ထောက်ပံ့ရေးကော်မတီ Diocesan level ERSP နဲ့ ဇုံ Level ERSP အဖွဲ့ ဖွဲ့ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ကရုဏာ မန်းလေးကနေ ပြုလုပ်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး လုပ်ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာသာတူ အုပ်စုတွေအနေနဲ့ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဖို့၊ ဘာသာတူများထံမှ နှစ်စဉ် ဝါတွင်းကာလမှာ ကောက်ခံတဲ့ ဝါတွင်း စုဗူးများကို ကရုဏာမန္တလေးရုံးမှ စနစ်တကျနဲ့ အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနေကြောင်းကို ဘာသာတူများ ပိုမိုသိရှိ နားလည်ပြီး ကျေးရွာအဆင့် သာသနာ အုပ်စုအဆင့် အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေများ စုဆောင်းတတ်တဲ့ အလေ့ အကျင့်တွေ တိုးပွား လာဖို့ ဦးတည်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်ဟုလည်း ကိုသန်းမင်းထွန်းမှ ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်မယ့် လုပ်ငန်းကတော့ ဆရာတော်နှင့် ကရုဏာမန္တလေးဒါရိုက်တာ ပါဝင်တဲ့ အစည်းဝေးလေးလုပ်ပြီး ဒီအလုပ်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကို တင်ပြပြီး ဇုံအဆင့် ၊သာသနာအုပ်စု အဆင့် ဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါမှာ သာသနာအဆင့် ဇုံအဆင့် ဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အမြင်ဖွင့်သင်တန်းတွေလည်း ပြုလုပ် ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့စည်းကနေပြီး မန္တလေးသာသနာအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဘေးအန္တရာယ်တွေရော ၊ ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်များကိုပါ ကိုင်တွယ်ပြီးတော့ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတွေကို လျော့နည်းနိုင်သမျှ လျော့နည်းအောင် လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ဟုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော ပြင်ဦးလွင်မြို့ အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူသော သခင်မဘုရားကျောင်းမှ ကရုဏာရေးကော်မရှင်မှ တာဝန်ခံ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စူဇန် အေးအေးဝင်းမှလည်း အရင်က သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံမှု နည်းပေမယ့် အခုလို ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါတဲ့အခါ ကိုယ်ကိုတိုင်ပဲ ခံနေရတယ် လို့ခံစားရတယ်။ အခု အရင်တုန်းက ကြားဖူးတာပဲရှိတယ်။ အခုကတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်ဖြစ်ခဲ့ ရင်ရော ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားရတယ်။ ပိုပြီးတော့ လှုပ်ရှား ခြင်လာတယ်။ ပိုပြီးတော့ ပါဝင် ကူညီချင်တယ်။ ဘေးအန္တရာယ် ကြုံတွေ့ရတဲ့နေရာတွေမှာ တက်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်လှုပ်ရှားမယ်။ အရင်က ဝါတွင်းစုဗူး စုရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို မသိခဲ့ဘူး။ စုဗူးပေးတဲ့အခါ ယူပြီး ဒီတိုင်းပဲ ပိုက်ဆံထည့်လိုက်တာပဲ။ အခုတော့ ဝါတွင်းကာလမှာ သာသနာကနေပေးတဲ့ စုဗူးဟာ ကရုဏာ ရုံးကနေပြီး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်တဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုတယ် ဆိုတာကို သိရတော့ ခုအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာ ဝါတွင်း စုဗူးတွေပေးတဲ့အခါမှာ သေသေချာချာ စုနိုင်ကြဖို့ ကိုယ့်သာသနာ ကလူတွေကို တိုက်တွန်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟု သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေး နွေးပွဲ တက်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိခဲ့ရသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြောပြခဲ့ပါသည်။
မန္တလေး ကရုဏာ မြန်မာလူမှု စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အသင်းအနေဖြင့် မန္တလေးသာသနာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ခြင်း ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
သာသနာပိုင်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံ၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေနှင့် ကာနွန်ဥပဒေ ( ၁၂၇၆၊ ၁၂၈၂)၊ နိုင်ငံတော်တရားဥပဒေနှင့် အညီထိန်းသိမ်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အစည်းအဝေး
posted3Aug 2016, 23:44 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated3Aug 2016, 23:45 ]
မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွင်းရှိ သာသနာပိုင်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံ၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အစရှိသည့် အခြေပစ္စည်းများ Temporal goods of the Church နှင့် ကာနွန်ဥပဒေ ( ၁၂၇၆၊ ၁၂၈၂) နိုင်ငံတော်တရားဥပဒေနှင့် အညီထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ အစည်း အဝေး ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၇-၂၉)ရက်နေ့အထိ ချမ်းသာကုန်းမယ်တော် ဘုရား ကျောင်းဝင်းအတွင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသာနာမှ ဆရာတော်ကြီး နီကောလားစ်မန်ထန်း၊ မြေယာကော်မတီဥက္ကဌ Fr.George ခင်မောင်ဌေး၊ အတွင်းရေးမှုး ဦးတင့်ဆွေနှင့် မန္တလေး သာသနာအတွင်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး(၁၃)ပါး၊ သီလရှင်(၉)ပါး၊ သာသနာအသီးသီးမှ ကိုယ်စား လှယ် (၁၂)ဦးတို့နှင့်အတူ အစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ဆရာတော်ကြီး နီကောလားစ်မန်ထန်းမှ ’’ သာသနာပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ အတွက်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုဆို တဲ့နေရာမှာလည်း ဝိညာဉ်ရေး၊ သာသနာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးဝင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ တစ်ဦး တစ်ယောက်ထဲအတွက် အသုံးပြုလို့မရကြောင်း၊ Parish တစ်ခု၊ Dio တစ်ခုတည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရာမဟုတ်ပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ကာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမှ တိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အဓိကပြောချင်သည့်အရာမှာ သာသနာပိုင်ပစ္စည်းအား မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက် ငှားရမ်းခြင်း၊ ပေါင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ များပြုလုပ်ပါက ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ကာနွန် ဥပဒေအရ သော်၎င်း၊ နိုင်ငံတော်တရားဥပဒေအရသော်၎င်း ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ’’ တိုိ့ကို အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြေယာကော်မတီ ဒါရိုက်တာ Fr.George ခင်မောင်ထွေးမှလည်း မန္တလေးကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွင်းရှိ မြေများသည် ရှေးခေတ်အခါက သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကျေးဇူးကြောင့်ရရှိထားပုံများ၊ အချို့မြေနေရာများသည် အလွန်အဖိုးတန်သော မြေများဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သာသာတူများအနေဖြင့် ထိုမြေများအား စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့် ရှောက်ကြ ရန်လိုကြောင်း၊ သာသနာပိုင်မြေအား အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပါက ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း။ ထို့သို့ သာသနာပိုင်ပေါ်တွင် နေထိုင်ပြီး ထိုမြေအား အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့သူများအားလဲ ထိရောက်သော အရေးယူမှုများကို မြေယာကော်မတီမှ အမှုဖွင့်ကာ ဖြေရှင်းခဲ့ရမှုများရှိကြောင်း၊ သာသနာအနေဖြင့် တိကျသော စာရွက်စာတမ်း ထောက်အထားများရှိသဖြင့် အမှုများမှာလည်း အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိ အခြေအနေပိုင်ဆိုင်ပုံများ၊ စာချုပ်စာတန်းပြုလုပ်ပုံများ၊ ပြဿနာများနှင့် ကျင့်သုံးမှုလက်ရှိအခြေအနေများ၊ ဝိသေဿဆံသော ပြဿနာများနှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည် စီမံကိန်းများရာထားပုံများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး မြေယာ ကော်မတီအတွင်းရေမှုး ဦးတင့်ဆွေမှလည်း ” သာသနာမြေပေါ်တွင် နေထိုင် သည့်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် သာသနာမြေပေါ်တွင် အခမဲ့နေထိုင်သူများနှင့် အခကြေးငွေဖြင့် ငှားရမ်း နေထိုင်သူများရှိကြောင်း၊ အခမဲ့နေထိုင်ရသူများမှာ သာသနာနှင့် သုံးနှစ် တစ်ကြိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရကြောင်း၊ သာသနာမှဆောက်လုပ်ပေးထားသော သာသနာ့တိုက်ခန်းတွင် အခကြေးငွေဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သူများသည် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် စာချုပ်ချုပ် ဆိုရကြောင်း၊ ကာလ ဒေသအလျောက် တိုက်ခန်းခများမတူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိလက်ရှိ နေလျှက် ရှိ်သည့် သာသနာ့မြေပေါ်တွင် ဆောက်ထားသည့် အိမ်အား မိမိဆန္ဒအလျှောက် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်ခွင့် မရှိကြောင်း၊ ပြုပြင်လိုပါကလည်း မြေယာကော်မတီထံသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားကာ မြေယာကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ရမှ သာလျှင် လုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိုလည်း အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ နှင့်တိုင်ပင်ကာ နိုင်ငံတော်တရား ဥပဒေနှင့် အညီနှစ်ဦး သဘောတူစာချုပ်ချုပ် ဆိုမှုများ ကိုလုပ်ဆောင်ကြောင်းတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြင်ဦးလွင် စိန်မေရီ သာသနာအုပ်စုမှ သာသနာ့အကျိုးဆောင်ဥက္ကဌ ဦးဘော်စကိုမှလည်း မြေယာကော်မတီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစည်းဝေးတခါမှ မတက်ဖူးဘူး။ မတက်ရတော့ ဘာမှ မသိရ ဘူးပေါ့ နော်။ အခု အစည်းဝေးတက်ခွင့်ရတော့ သိလာရတာက တချို့မြေတွေက ဒီတိုင်း မထားသင့်ဘူး။ လိုက်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်။ ပြန်ရအောင်လုပ်သင့်တယ်။ အဲဒါတွေ သိသွားတော့ သာသနာအတွက် အကျိုးရှိမယ့်အရာတွေက အများကြီး အလေအလွင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ စိတ်ထဲ ခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေကို ဘယ်လိုပြန်ပြီး ထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတဲ့ အသိစိတ်ဝင်လာပြီး ဒါတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို သိလာပြီဟု ’’ အစည်းဝေးတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ရရှိခဲ့သည့် အကျိုးကျေးဇူးကို ပြောပြခဲ့ပါသည်။
မန္တလေး စိန်ဂျွန်းသာသနာအုပ်စုရှိ ကရုဏာရေးသီလရှင်အသင်းဂိုဏ်းမှ Superior စစ္စတာရ် ရိုစ့်မေရီခင်သန်းမှလည်း ’’မန္တလေးသာသာရဲ့ ရှေးခေတ်က ဘုန်းကြီးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေရဲ့ အကျိုးမြတ်က လက်ရှိလူတွေခံစားရတယ်။ အဝေးကိုမြင်ကြည့်ပြီး သာသနာအတွက် လုပ်ခဲ့တာတွေ ခုချိန်မှာ ခံစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် မန္တလေးသာသနာအတွက် ဝမ်းသာတယ်။ မန္တလေး သာသနာ မှာမြေတွေအများကြီးရှိတာအရင်ကမသိခဲ့ဘူး။ ခုမှသိတာပါ။ ဒီမှာ ပြောသွားတဲ့မြေနဲ့ပတ်သက် တဲ့ကိစ္စ တွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာ ပညာတိုးတယ်။ တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒီလိုမျိုး မြေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရှုပ်အရှင်းတွေရှိလာမယ် မလာဘူးဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကက်သလစ် အသင်းတော်ရဲ့ဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံ တော်က ချမှတ်ထား တဲ့ဥပဒေ တွေကို ခုလိုရှင်းပြပေးခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာကို ပညာရခဲ့ပါတယ်။ ’’ဟု အစည်းဝေးတက်ရောက် ခြင်းဖြင့် အကျိုးခံစားရပုံကိုပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။
မြေယာကော်မတီအဖွဲ့စည်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ကိုယ်ပိုင်မြေမရှိတဲ့ ဆင်းရဲသားများ ယာယီ နေထိုင်ရန်၊ ဘာသာတူများ တစ်စုတစ်ဝေး နေထိုင်နိုင်ရန်နှင့် ဘုရားနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘာသာတူများ နေထိုင်ရေးဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြေယာများအား စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
Pinky ( MDY-OSC)29.7.2016
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ် ဓမ္မတေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ စတုတ္ထအဆင့် ကျင်းပခြင်း သတင်း
posted 28 Jul 2016, 00:26 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 28 Jul 2016, 00:26 ]
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ် ဓမ္မတေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ စတုတ္ထ အဆင့်ပြိုင်ပွဲကို ၂၄.၇.၂၀၁၆ ရက် နေ့က ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ရှိ စိန်ပီတာ စိန်ပေါဘုရားကျောင်းတွင် နံနက်(၁၀) နာရီက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲသို့ ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ဆရာတော်ကြီးဂျွန်စောယောဟန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ် လူထု ဆက်သွယ် ရေးဒါရိုက်တာ Fr.Leo Mang နှင့် ကက်သလစ်အနုပညာရှင်များအဖွဲ့မှ အနုပညာရှင်များနှင့် သာသနာအသီးသီးမှ ဘာသာတူများ လာရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒိုင်လူကြီးများအဖြစ် ဒေါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်း၊ ဦးဆစ်ရယ်၊ ဦးရယ်ဂျီ ၊ အခမ်းအနားမှုးအဖြစ် ကိုဘော်စကို တို့မှ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲတွင် တတိယအဆင့်မှ ရွေးချယ်ခံ (၁၀)ဦးက ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ နောက်ဆုံး Top (5)အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရန် (၅)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ရာ တောင်ငူသာသနာမှ မေရီက (၂၃၆)မှတ်၊ ပြည်သာသနာမှ လသွေးဥာဏက (၂၃၄) မှတ်၊ မန္တလေးသာသနာမှ ဖိုးလုံးက (၂၃၄)မှတ်၊ ပုသိမ်သာသနာမှ ဆိုဖီယာ နန့်လှမြတ်မွန်က(၂၃၁)မှတ်၊ ဗန်းမော်သာသနာမှ ဂျွန်ဇော်ရိန်အောင်က (၂၂၈)မှတ်တို့ဖြင့် နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ် အဆင့် သို့ တက်ရောက်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ မပါဝင်သူ ကျန် (ငါး)ဦးအား လည်း တေးသံရှင် နွဲ့ယဉ်ဝင်းမှ တစ်ဦးကို ကျပ်(၅၀၀၀၀)ဆု ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ုကုန်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှဆရာတော်ကြီး ဂျွန်စောယောဟန်မှလည်း ” ဒီကနေ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကျင်းပတယ် ပထမ ဒုတိယ ပဉ္စမ ရတဲ့သူရှိတယ်။ အဲဒါက အဓိက မကျပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ကျွန်ုပ်တို့ဆိုတဲ့ သံစဉ်က ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာ ဘုရားပေးတဲ့ ကျေးဇူးတော်နဲ့ အစဉ်အမြဲ ဘုရားဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ သားငယ် သမီးငယ် တွေဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ သားငယ်သမီးငယ်တို့ရရှိထားတဲ့ ဒီကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ ဆက်လက်ပြီး သာသနာပြုနိုင် ကြပါစေ၊ ခွန်အားပေးနိုင်ကြပါစေ လို့လည်းဆု တောင်းပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး စီစဉ်ပေးတဲ့ Fr.leoနဲ့ ကက်သလစ် အနုပညာရှင်များ အဖွဲ့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တီးခတ်ပေးကြတဲ့ သူများကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်’’ ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ်ဓမ္မတေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ၏ နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ၂၀၁၆ခုနှစ် ၊သြဂုတ်လ၊ (၂၄)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်တွင် ဆက်လက် ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Pinky (MDY – OSC) 24.7.2016
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ်ဓမ္မတေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ တတိယအဆင့်(ပ)ကြော့ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခြင်းသတင်း
posted 20 Jul 2016, 01:54 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 20 Jul 2016, 01:54 ]
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ်ဓမ္မတေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ တတိယအဆင့်(ပ) ကြော့ပြိုင်ပွဲကို ဇူလိုင်လ(၁၆)ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန် စိန်ပီတာစိန်ပေါလ်ဘုရာကျောင်းတွင် နံနက် (၁၀) နာရီက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူထုဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြန်ကြားရေး ဒါရိုက်တာ ဖာသာရ်လေအို၊ မန္တလေးသာသနာ လူထုဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးရုံးမှ ဒါရိုက်တာ Fr.Henry Bran Mai, စစ္စတာရ်ဆေးဖော၊ ဗန်းမော်သာသနာ လူထုဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးရုံးမှ Fr.တူးဂျာ၊ အမှတ် ပေး ဒိုင်လူကြီးများအဖြစ် ကက်သလစ် အနုပညာရှင်များအဖွဲ့မှ ဦးဆစ်ရယ်၊ ဒေါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်း ၊ဦးရယ်ဂျီ၊ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ် နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တေးသံရှင် ဆိုင်းနော်တို့နှင့် အတူ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲတွင ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ဒုတိယအဆင့် ပြိုင်ပွဲမှ ရွေးချယ်ခံ ထားရသူ (စုစုပေါင်း ၃၀)ဦးထဲမှ (၂၉)ဦးသည် တတိယအဆင့် (ပ)ကြော့ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ တတိယအဆင့် (ဒု) ကြော့သို့ တက်ရောက်ရန်(၁၀)ဦးကို ပြန်လည် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ပြည်သာသနာမှ မောင်ဆလိုင်းလသွေးဥာဏက (၂၂၅)မှတ်၊တောင်ငူသာသနာမှ မောင်အင်ဒြူးက (၂၂၅)၊ လားရှိုးသာသနာမှ မောင်ရော်ဘင်က(၂၂၅)မှတ်၊ မန္တလေးသာသနာမှ မောင်ဖိုးလုံးက (၂၂၄)မှတ်၊ ပုသိမ်သာသနာမှ မောင်စနောဧက(၂၂၄)မှတ်၊ တောင်ငူသာသနာမှ မမေရီက(၂၂၄)မှတ်၊ ရန်ကုန်သာသနာမှ မောင်ကောင်းက (၂၂၄)မှတ်၊ ပုသိမ်သာသနာမှ မဆိုဖီယာ နန့်လှမြတ်မွန်က (၂၂၃)မှတ်၊ ဗန်မော် သာသနာမှ မောင်ဂျွန်ဇော်ရိန်အောင်က (၂၂၂)မှတ်၊ မန္တလေးသာသနာမှ မအက်စ်ဆိုင်းနူးပန်က (၂၂၁)မှတ်တို့ဖြင့် နောက်တစ်ဆင့်သို့ ထပ်မံ တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါသည်။
ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသောသူများထဲမှ ပြည်သာသနာမှ မောင်ဆလိုင်းလသွေးဥာဏာ၏ ခံစားချက်ကို မေးမြန်းခဲ့ရာ ”စပြိုင်ကတည်းက ဘုရားနဲ့ အတူပြိုင်ပွဲ ဝင်ခဲ့တာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစထက် ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘုရားနဲ့အတူ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ လေ့ကျင့်မှုကတော့ ဒုတိယအဆင့်ပြိုင်ပွဲ ပြည်သာသနာမှာ ပြုလုပ်ကတည်းက ပြည်သာသနာ ဘုန်းဘုန်းချစ်သိန်းက ရွှေတောင်ကနေ Vocal Tranning အတွက် ဆရာချစ်ကို ခေါ်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။ သေသေချာချာ အသေးစိတ် သင်ပြပေးခဲ့တယ်။ ပြည်သာသနာကနေ တတိယအဆင့်ကို ပြန်လည် ရွေးချယ်ခံတဲ့အခါမှာ ကျနော်တစ်ယောက်ပဲ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ အခု တတိယအဆင့်(ဒု)ကြော့ ကိုလည်း ထပ်မံ တက်ရောက်ဖို့ ရွေးချယ်ခံရတာလည်း ဘုရား ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။
တေးသီချင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ဝင်စားမှုရှိလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာတော့ ငယ်ငယ်လေး ထဲက စ်ိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းတွေလိုက်ဆိုတယ်၊ ညဉ်းတယ်။ နောက် ရန်ကုန်ကို ကျောင်းတက်ဖို့ ပြောင်းလာချိန်မှာတော့ သီချင်းတွေကို အရမ်း စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်တိုင် ဆိုချင်စိတ်လည်း ဖြစ်လာတယ်။ အဆိုတော်တွေ ဆိုထားတဲ့အသံကို နားထောင်ပြီး ဆိုချင်စိတ် ပေါက်လာတယ်။ ကောင်းတဲ့ အဆိုရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်လာတယ်။အဲဒီကနေ အိမ်မက် ဖြစ်လာတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင် ဆိုင်ပဲ ဘုရားသခင်က ဒီလမ်းကို ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကက်သလစ်လူထုဆက်သွယ်ရေးရုံးကနေ ပြိုင်ပွဲကျင်းပပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကနေ ပြုလုပ်ပေးလို့ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ ကက်သလစ်တေးသံရှင်တွေ အရမ်းနည်းတော့ ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေ လုပ်ပေးခြင်းဟာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဘုရားအလိုတော်နဲ့လည်း ညီတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒိုင်လူကြီးများကလည်း တကယ် အရည်ချင်းပြည့်ဝပြီး သေသေချာချာ အကဲဖြတ် အမှတ်ပေးခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ပြောပြပေးတဲ့အခါမှာ လိုအပ်တာတွေကို ထပ်မံ ပြင်ဆင်ဖို့ သူတို့ရဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ အကဲဖြတ် အမှတ်ပေးမှုတွေကြောင့် နောက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အမှားနည်းအောင် ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အဆိုတော်တွေ အားလုံးကို သဘောကျပါတယ်။ ကိုယ်ဆိုမယ့်အခါမှာလည်း မူရင်း အဆိုရှင် သီဆိုထားတဲ့ ပုံစံအား သေချာ နားထောင်ကြောင်း မူရင်း အဆိုရှင်က ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို ခံစားပြီး သီဆိုထားလဲ ကိုယ့်အလှည့်ကျရင်ရော ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ ဘယ်လိုမျိုးလေး လှအောင်ဆိုမလဲ ဆိုပြီးတော့ အမြဲတွေးတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ခဲ့တဲ့ ကိုဆိုင်းနော်ရဲ့သီချင်းကိုလည်း နှလုံးသားနဲ့ခံစားပြီး ဆိုခဲ့တာပါ။ သူ့အသံကလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ အတွက်၊ ကျနော့်အသံနဲ့လည်း လိုက်မယ်ထင်လို့ ရွေးချယ်သီ ဆိုခဲ့တာပါ။
ဆက်လက်ပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ ရွေးချယ် မခံရသူများနှင့် လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ကြသော ဝါသနာတူ ရွက်ပုန်းသီး ညီအစ်ကို မောင်နှမများကိုလည်း “ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစကို ယုံကြည်ပြီး ဘုရားကို တကယ် ကိုးစားပါ။ အောင်မြင်မှုဆိုတာဟာ ဘုရားသခင်ဆီက လာတာပါ။ ဒါကြောင့် ဘုရားကို ဆုတောင်းပြီး ဆက်ကပ်ပါ။ ဘုရားသခင် တကယ် မတတ်နိုင်တဲ့ အရာဆိုတာ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် သူက အကုန်လုံးကို လမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်တကယ် ဝါသနာပါတဲ့အရာကို ဆက်ကြိုး စားပါလို့ အားပေးစကားကို ပြောခဲ့ပါသည်။ မောင်ဆလိုင်းလသွေးဥာဏသည် လက်ရှိမှာ အသက် (၁၇)နှစ် ကျော်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)မှာ ပထမနှစ် First(MBBS)ကို တက်ရောက်နေသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
တေးသံရှင် ဆိုင်းနော်မှလည်း “ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားတဲ့သူတွေ အားလုံးက သာသနာ အသီးသီးကနေ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်ကျော်ပြီးမှ ဒီအဆင့်ထိ တက်လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဆိုတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အနိုင်အရှုံးဆိုတာတော့ ရှိမှာပဲလေ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ သူက နိုင်တာဆိုတော့ ရှုံးတဲ့သူ အနေနဲ့ကလည်း အားမငယ်ပါနဲ့။ ဒီပွဲမှာ မနိုင်ပေမဲ့ ဒီအဆင့်ထိ တက်လာပြီဆိုမှတော့ သူတို့ကို အကိုတို့သိ သွားပြီ၊ တွေ့သွားပြီ ဘယ်သူတွေက အရည်းချင်း ရှိလဲဆိုတာ သိသွားတဲ့အတွက် ဒါဟာ သူတို့ အားလုံးအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ အခါမှာ ပြိုင်ပွဲအကြောင်း သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်အသံ ဘယ်လိုရှိလဲ၊ ဘယ်လိုသီချင်းမျိုးနဲ့ လိုက်လဲ၊ကိုယ်ကြိုက်တာထက် ကိုယ်နဲ့လိုက်မယ့် သီချင်း၊ ကိုယ်ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်တဲ့ သီချင်းကို ရွေးချယ်ပြီးမှ ပြိုင်စေချင်တယ်။ လာပြိုင်တဲ့အခါမှာ သီချင်းကို ကိုယ်က ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ ပါဖောမန့်ပြရတယ် မပြရဘူး ဆိုတာ ထက်ကို သီချင်းကို အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ထားတာက အကောင်းဆုံးလို့ ပြောချင်ပါတယ်ဟု သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသိထား သင့်သည့် လုပ်ဆောင် သင့်သည်များကို ပြောပြခဲ့ပါသည်။
အမှတ်ပေး ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော တေးရေးတေးဆို ဦးCYRIL မှလည်း ရစေချင်တာကတော့ အားလုံးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်း ပိုကောင်းတဲ့သူတွေက ရသွားတာပေါ့။ ကိုယ်တတ်တဲ့ပညာကို နည်းနည်းလေးတတ်ထားရုံ မဟုတ်ဘဲနဲ့ များများ သင်ယူ လေ့လာ ဖို့လိုတယ်။ ဒီထဲကို သေချာ စိတ်ဝင် စားဖို့လိုတယ်။ဒါမှလည်း အန်ကယ်တို့အနေနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်း ပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ အန်ကယ်တို့နဲ့တွဲပြီး လုပ်ဆောင်လို့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို Music နဲ့ပတ်သက်ပြီး တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစေချင်တယ်။ ကိုယ့် ကက်သလစ်သာသနာကနေ အဆိုတော်တွေ များများ ထွက်ပေါ်စေချင်တယ်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကက်သလစ် တေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ကက်သလစ်လူထုဆက်သွယ်ရေးနေ့၏ နှစ်(၅၀)ကြိမ်မြောက်ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အနုပညာရှင်များသည် လှပခြင်းကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သောသူများ၊ လူသားထုအတွက် မျှာ်လင့်ချက်၏ သက်သေခံသူများ၊ကြေညာ ဟောပြောသူများဖြစ်ကြောင်းကို နှလုံးမူကာ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်နှင့် အများအကျိုး သယ်ပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ကက်သလစ် အနုပညာရှင်များစွာ ထွက်ပေါ်လာစေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ်လူထု ဆက်သွယ်ရေး ဒါရိုက်တာ Fr.Leo က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ် တေးသီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲ တတိယဆင့် (ဒု)ကြော့ပြိုင်ပွဲကို ဇူလိုင်လ(၂၄)ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန် စိန်ပီတာ စိန်ပေါလ်ဘုရားကျောင်းတွင် ပြန်လည် ပြုလုပ်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ တတိယအဆင့် (ဒု)ကြော့တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူ (၁၀)ဦးထဲမှ (၅)ဦး အား ထပ်မံရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ ထို(၅) ဦးထဲမှ (ပ၊ဒု၊တ)အား သြဂုတ်လ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ထမ်မံ ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ချောင်းရိုးကျေးရွာ ခရစ်ယာန်တို့အားမှိုင်းမတော်မူ သော သခင်မဘုရားကျောင်းတွင် ဝတ်စောင့်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း
posted 15 Jul 2016, 19:13 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 15 Jul 2016, 19:14 ]
မန္တလေး ကက်သလစ်သာသနာအတွင်းရှိ ရေဦးဇုံ ချောင်းရိုးကျေးရွာ ခရစ်ယာန်တို့အားမှိုင်းမတော်မူ သော သခင်မဘုရားကျောင်းတွင်ဝတ်စောင့်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ် သာသနာအတွင်းရှိ ချောင်းရိုးရွာ ခရစ်ယာန်တို့အား မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မဘုရားကျောင်းတွင် (၉.၇.၂၀၁၆) ရက်နေ့က မန္တလေး သာသနာလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ဗဟို ကော်မတီ မှ လူငယ် ဒါရိုက်တာ Fr.Augustin Tin Mg Htun နှင့် ရေဦးဇုံ ချောင်းရိုးရွာမှ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး Fr. Augustine Win Myint , Fr. Byan ဗညား တို့ ဦးဆောင်ကာ တစ်ရက်တာ ဝတ်စောင့်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း အစီအစဉ်သို့ ဖိတ်ကြားထားသော ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ ရေဦးဇုံ အတွင်းမှ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ဘာသာတူများ (၁၀၀၀) ကျော် ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ပထမဦးစွာ ဘုန်းတော်ကြီး ဘော်စကိုဘိုဘိုမှ သြဝါဒ တရားရေအေး တိုက်ကျွးရာတွင် “ ဒီနှစ်ဟာ ဘုရားခင်၏ ကောင်းမြတ်သော သနားတတ်သော၊ ကြင်နာသနားတတ်သော ဘုရားရှင်ရဲ့ နှစ်ဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်မှာ ဒီလိုမျိုး ရွှေချောင်းရိုးရွာမှာ ကောင်းမြတ်သနာြး ကင်နာခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ ဟာခံစားကြမှာဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံး ဘုရားကို ကျေးဇူးတင်ရအောင်။ သနားသောဘုရားက ဒီကနေ့ ဒီမှာ ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ မိတ်သဟာယတွေကို သူ့ရဲ့ သနားခြင်း၊ ကျေးဇူးတော်ကို ပေးနေတယ်။ အဲ့ဒီ အခွင့်အရေးကို ယူကြရအောင်။ တခါတုန်းက သမီးလေးတစ်ယောက်က ရေမွှေးသုံးတယ်တဲ့။ ရေမွှေးသုံးတဲ့ အခါမှာ သမီးကနေ အမေကို ပြောတယ။် အမေတဲ့ ဒီရေမွှေးက အင်မတန်မှ ဈေးကြီးတယ်၊အနံ့အသတ်က လူတောထဲတိုးလို့လည်း ကောင်းတယ်။ ရေမွှေးအနံ့ကို လူတွေက ရလို့ရှိရင် စိတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ လူနားမှာ လာကပ်လည်း အဆင်ပြေတယ်တဲ့။ အမေလည်း သုံးပါလား ဆိုပြီး သမီးလုပ်သူက ပြောတယ်။ အမေကလည်း ပြန်ပြောတယ် သမီးတဲ့ ရေမွှေးတကာ ရေမွှေးထဲမှာ သမီးသုံးတဲ့ ရေမွှေးထက် ကောင်းတဲ့ ရေမွှေးရှိတယ်။ အဲဒါ ဘာလည်းဆိုရင် ဖြူစင်ခြင်း ရေမွှေး၊ ရိုးသားခြင်း ရေမွှေး၊ ဘုရားပေးတဲ့ ရေမွှေးကို သုံးပါတဲ့။ နေရာတကာမှာ လူတောတိုးပြီး မျက်နှာလည်း ရစေတယ်။ အဲ့ဒီရေမွှေးကို ပိုသုံးပါ သမီးတဲ့။ ဒီက လူတွေ ဘာရေမွှေး သုံးကြမလဲ၊ ကျနော်တို့ ဘယ်ကနေလာပြီး ဘယ်ကိုသွားကြမလဲ။ စဉ်းစားကြပါ။ ဒီကနေ့ ဝတ်စောင့်ပွဲကနေ အဖြေ ရလိမ့်မယ်။ ဝတ်စောင့်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ။ ဝတ်စောင့်တယ်ဆိုတာ ဝတ်တရားကို စောင့်ခိုင်းတာ။ ဝတ်တရားတွေဆိုတာ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို စောင့်။ ဘုရားရဲ့ ဝတ်တရား ကို စောင့်၊ သင့်ရဲ့ ဘုရားခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့် ချစ်ကြ။ အဲ့ဒီ ဝတ်တရားကို စောင့်။ အဲဒါကို ဝတ်စောင့်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ဝတ်စောင့်ကြပါ။ ဘုရားရဲ့ ကြင်နာသနားခြင်းနှစ်မှာ ကိုယ့်အတွက် ဘုရားက ပေးနေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မိုးကောင်းကင်နဲ့ ဘာနဲ့မှ မလဲပါနှင့် ”ဟု ဝတ်စောင့်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် ကျေးဇူးတော်များကို ဝေမျှခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး Fr.Byan ဗညား မှလည်း “ကျနော်ဟောမယ့်တရားတွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ် တော်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ ဟောမှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်ဟောတဲ့ တရားမှာ ကြားနာပြီးတော့ အသတ်တာ မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သိရက်နဲ့ အသက်တာမှာ မိမိ လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်း လုပ်မယ်ဆိုရင်တေ့ာ၊ သမ္မာကျမ်းစာမှာရှိတဲ့ ကျိမ်ခြင်း အမင်္ဂလာအားလုံးဟာ မိတ်ဆွေအပေါ်ကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်က ပြောပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ရှင်ပေါလူးက ပြောပါတယ် ငါဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို မဟောပြောလျှင် ငါ့၌ အမင်္ဂလာ ရှိစေ။ ဒီကနေ့ ကျတော် ဟောမယ့်တရား အားလုံးက သမ္မာကျမ်းစာ ပေါ်မှာပဲ အခြေခံမယ်။ မိတ်ဆွေ သင်လက်ခံမယ် ဆိုရင်တော့ ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ ကောင်းချီးမင်္ဂလာအားလုံးနဲ့ ဘုရားသခင် ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာ သင့်အပေါ်မှာ ဒီကနေ့သက်ရောက်မယ်။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ဟောပြောလော့ အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေ ၊မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ကြိုးစားအား ထုတ်လော့။ ဒီကနေ့ ကျတော် ဒီကို ရောက်ရှိလာတာကျနော် အားလို့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်မှာ အချိန်မရှိ ဘဲနဲ့ လာဟောတာ။ ဒါဟာ နှုတ်ကပတ်တရားတော် ကနေ ခေါ်တဲ့အရာကို လက်ခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ကို ဖော်ထုတ်လော့။ ဒီကနေ့ ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ သူဟာ မိမိရဲ့အပြစ်ကို မိမိ ဖော်ထုတ်ရမယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားပြီးတဲ့အခါမှာ မိမိရဲ့အပြစ်ကို မိမိ ဖော်ထုတ်ရတော့မယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဆုံးမခြင်းကို ခံယူဖို့ရောက်ရှိလာတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောတဲ့အခါ ၊ခံယူတဲ့ အခါမှာ စိတ်ရှည်ပါ။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဟောပြော သတ်သေခံယူခြင်းအားဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်၌ ရှင်သန်ခြင်းအားဖြင်သတ်သေပြရမယ်။ မိမိခရစ်ယာန်လို့ ပြောပြီးတော့ မိမိ တပ်မက် တဲ့အရာ ၊အပြစ်ကို ပို့ဆောင်တဲ့အရာတို့မှာ မိမိဟာ အချိန်ပေးပြီး လျှောက်လှမ်း နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါ ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူး။ ခရစ်ဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ခံ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီကနေ့အမည်ခံ ခရစ်ယာန်ကနေ ဘုရားသခင်ရဲ့ သားသမီးဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ အဖြစ်သို့ ဒီကနေ့ လျှောက်လှမ်းရအောင်။ ကျနော်တို့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ ကယ်တင်ခြင်း မရနိုင်ပါဘူး။
ငါခရစ်ယာန် ဖြစ်တယ် ဆိုတာနဲ့ပြည့်စုံပြီ၊ လုံလောက်ပြီ ထင်နေလား။ ဘုရားသခင်က ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်း ၊မဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှာ မကြည့်ဘူး။ ဘုရားသခင်က ဘာကိုကြည့်တာလဲ ဆိုတော့သူရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် ကို မိမိဟာနေ့စဉ် အသတ်တာမှာ၊ အချိန်တိုင်းမှာ ဆင်ခြင် ထောက်ရှုပြီးတော့ ဘုရားခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ရှင်သန် လျှောက်လှမ်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို အလိုရှိတယ်။ အဲဒီအရာပေါ်မှာ ဘုရားသခင်က ကျေနပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ့မိမိရဲ့ အသက်တာကို မိမိ ပြန်လည်ဆင်ခြင်ပါ။ သမ္မာတရားကို နားမထောင်ပဲ ဒဏ္ဍာရီစကားကို နားထောင်ရင် လွဲမှားကြလိမ့်မယ်။ လူတွေကိုပြောတဲ့ စကား၊ ပုံပြင်တွေ၊ အကြောင်း အရာတွေ အပေါ်မှာပဲ နားထောင်နေတဲ့ အခါမှာ မှားယွင်းတဲ့ အယူဝါဒနောက်ကို လိုက်ပြီး လမ်းလွဲကြလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ယခုကျန်းမာတဲ့အချိန်၊ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်၊ နုပျိုတဲ့အချိန်၊ အချိန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ နောက်ကို အမှန်တကယ်လိုက်ပါ။ ယခု အသက်ရှင် နေတဲ့အချိန်မှာ မိမိရဲ့အသက်တာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အာပတ်ဖြေပါ။ အာပတ်ဖြေတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်တော်ဘုရား တပည့်တော် ငရဲသွားဖို့ ကြောက်တယ်။ မှန်တယ် ငရဲသွားဖို့ ကြောက်တယ်။ တကယ်တမ်း ဘုရားကို ချစ်လာပြီဆိုရင် ငရဲသွားရမှာ ကြောက်လို့ မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ မေတ္တာ စေတနာတော်ကို ထိခိုက်ကျူးလွန်မိ တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဘုရားသခင်ကို သနားကြင်နာတဲ့စိတ်နဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲတဲ့ စိတ်နဲ့ အာပတ်ဖြေရမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီ အသတ်တာကို ကျင့်ဆောက်တည်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ မိမိ နောက်နောင် ဒီအပြစ်တွေကို လုံးဝ မလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးမှ အာပတ်ဖြေပါ။ ဒီကနေ့ ဇာတိပကတိ အသက်တာမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ အသတ်တာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အသတ်တာကိုပြန်လည် ဆင်ခြင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အသက်တာမှာရှင်သန်ကာ ဝိညာဉ် ပကတိအားဖြင့် ရှင်သန် နေထိုင်ရမယ်။ ဝိညာဉ်ပကတိမှာ ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့ သူတွေမှာ ဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုရင် ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သတ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်တည်ခြင်း၊ အစရှိတဲ့ ကျေးဇူးတော်တွေကို ခံစားရမှာဖြစ်တယ်” ဟု အသက်တာတွင် နှုတ်ကပတ်တော် အတိုင်း ကျင့်ဆောက် တည်နေထိုင်ခြင်း အားဖြင့်သာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်မည့်အကြောင်းကို ဟောပြောခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ညပိုင်းတွင် အာပတ်ဖြေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းအစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကုသခြင်း အစီအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားရသူတစ်ဦးမှ သတ်သေခံရာတွင် ကျမ နှာခေါင်းပိတ်နေတာ၊ နှာရည် မယိုတာခြောက်လကြာပြီ၊ ဆေးထိုး ဆေးသောက်လည်း လုပ်ရေတယ်။ ဘာမျှ တိုးတတ်မလာခဲ့ပါဘူး ဒီကနေ့ ဝတ်စောင့်ခြင်း အစီအစဉ်ရဲ့ကုသခြင်း အစီအစဉ်မှာ လဲကျပြီးနောက် ငိုရင်းကနေ မျက်ရည် တွေနဲ့အတူ နှာရည်တွေပါ ကျလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်လို့ပဲ ခံယူ ပါတယ်ဟု သတ်သေခံခဲ့ပါသည်။
ဒီမှာ လူငယ်များနှင့် လူကြီးတွေ၊ကလေးတွေ ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာအတွက် ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အခါမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ မျက်နှာတော်ကို ထောက်ပြီးတော့ ဒီမှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ သားသမီး တွေကို ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ တစ်ယောက်စီရဲ့ အသက်တာ ဘုရားသခင်နဲ့ ပိုမို ရင်းနှီး မိတ်သဟာယဖွဲ့ ပေါင်းစပ် ရှင်သန် နေထိုင်သွားဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးရောက်ရှိ လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟု Fr.Byan ဗညား မှပြောကြားခဲ့ပါသည်။